Fahaizana ilaina amin'ny fametrahana AI mahomby - Victor Mochere
Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia nivoatra ho iray amin'ireo teknolojia manaitra indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Tsikelikely, ity teknolojia matanjaka ity dia nahatonga toerana lehibe eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana. Ny ankamaroan'ny orinasa lehibe dia manana fampiasam-bola amin'ny teknolojia AI. Saingy, kely kokoa ny fampiasana ny fahaiza-manao AI amin'ny asany. Izany dia satria fanamby lehibe ny fametrahana AI. Ny fangatahana matihanina manana fahaiza-manao AI lehibe sy mari-pahaizana matihanina sahaza dia avo lavitra noho ny fisiana.
Na ireo izay nianatra AI tany amin'ny oniversite aza dia tsy manana fahaizana amin'ity sehatra ity. Antony roa lehibe mahatonga izany ny tsy fahampian’ny loharanon-karena sy ny fotodrafitrasa sahaza. Na izany aza, indraindray ireo izay mianatra tena avy amin'ny loharano toy ny boky, fampianarana an-tserasera, sns. Izany dia miteraka fanontaniana tena manan-danja, "Ahoana no hamaritana raha manana ny fahaiza-manao ilaina ny kandidà iray mba ho lasa tena fanaparitahana AI?"
Ireto ny fahaiza-manao tena ilaina ilaina amin'ny fametrahana AI mahomby.
1. Fahaizana mianatra, mampifanaraka ary mifanandrify amin'ny fandrosoana mitranga eo amin'ny sehatry ny AI
2. Fahalalana momba ny indostria miaraka amin'ny fahalalana sehatra sy sehatra
4. Ny fahaizana mifampiresaka
5. Fahalalana lalina momba ny fanao fanarahan-dalàna
Mivoatra hatrany ny teknolojia ary tsy ankanavaka ny AI. Ny tsiambaratelon'ny fifaninana amin'ity tontolo ara-teknolojia sy mivoatra ity dia ny fanatsarana ny tenanao tsy tapaka. Toy izany koa, raha maniry ny hivoatra amin'ny sehatry ny fametrahana AI ny fikambananao, dia tokony ho fitaovana amin'ny matihanina AI izay manana fahaizana mianatra, mampifanaraka ary mampifanaraka ny dingana amin'ny fandrosoana mitranga eo amin'ny sehatry ny AI. Algorithm, fitaovana, paikady vaovao dia mipoitra hatrany amin'ny sehatry ny Artificial Intelligence.
Raha mampiasa ny algorithm farany indrindra ny mpifaninana aminao nefa tsy manana fahaizana hianatra sy hampiasa azy ireo ny ekipanao AI, dia mazava ho azy fa ho tara ianao. Rehefa avy nilaza izany ianao dia tokony handinika raha manana fanatsarana ny tena sy fahaizana mianatra tsy tapaka ny mpiasa vaovao na ny mpikambana ao amin'ny ekipanao AI. Ankehitriny, ny fanontaniana mipetraka eto dia ny fomba fandinihana ny fahaiza-manaon'ny kandidà iray? Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy hanampy anao amin'izany.
a. Farito ireo mari-pankasitrahana fanampiny azon'ny kandidà iray
Ny iray amin'ireo famantarana mazava indrindra amin'ny fahaiza-manaon'ny kandidà iray dia ny fanamarinana fanampiny azony. Ireo izay liana amin'ny fianarana ihany no hanao ny dia fianarana fahaiza-manao fanampiny. Ny ankamaroan'ny olona dia mianatra fotsiny izay ampianarina azy any amin'ny oniversite ary manantena ny hokaramaina amin'izany. Saingy, tsy mijanona amin'ny fianarana any amin'ny oniversite ny mpianatra mafana fo, manitatra ny fahaizany izy ireo ary mahazo tombony mazava amin'ny mpifaninana aminy.
b. Diniho ny fahavononany hanaiky ny hevitry ny hafa
Ireo izay manana fahaizana mianatra tsara dia misokatra amin'ny fanekena ny hevitry ny hafa. Tsy mifikitra amin'ny heviny sy ny finoany izy ireo. Misokatra hatrany amin'ny hevitra sy fomba fijery vaovao ary vonona ny hanova ny heviny izy ireo raha mianatra zava-baovao. Mba hanombanana ny fahavononan'ny kandidà iray handinika ny hevitry ny hafa, dia azonao atao ny mametraka fanontaniana aminy.
Ohatra iray amin’ny fanontaniana toy izany ny hoe: “Efa nisy tsy fifanarahana tamin’ny mpikambana iray ao amin’ny ekipa ve ianao? Raha eny, inona no nataonao na ahoana no niatrehanao izany?” Fanampin'izay, raha ny momba ny ekipanao AI misy anao dia azonao atao ny mamaritra ny fahavononan'ny mpiasanao hianatra amin'ny fijerena tsara ny fomba iatrehany ny tsy fitovian-kevitra na ny fihetsik'izy ireo rehefa manandrana mampianatra azy ireo zava-baovao ianao.
c. Anontanio ny momba ny ho avy
Io no iray amin'ireo fomba tsara indrindra hamaritana ny fanirian'ny olona iray hianatra. Anontanio ny zavatra hataony amin’ny hoavy. Raha toa ka misy zavatra hianarana na hahazoany fahaiza-manao, ny kandidà na ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia tena manokan-tena amin'ny fanitarana ny fahalalany.
Miaraka amin'ny fahalalana tsara momba ny fiasan'ny AI, ny algorithm ary ny fitaovana, dia misy zavatra hafa ilain'ny ekipan'ny deployment AI anao hahomby. Izy io dia ny fahaiza-manao indostrialy miaraka amin'ny fahalalana sehatra sy sehatra. Rehefa manana fahalalana manan-danja momba ny indostrianao sy ny sehatra misy anao ny manam-pahaizana AI anao vao afaka mamorona algorithm marina hanamafisana ny orinasanao. Raha tsy misy fahalalana tsara momba ny sehatra sy sehatra misy anao dia mety ho sarotra kokoa noho ny takina ny algorithm-n'izy ireo.
Ny sehatra tsy saro-pady toy ny fitsaboana, ireo fahasarotana ireo dia mety hampidi-doza mihitsy aza. Mety hampidi-doza ny ain’ny olona ny fahadisoana sy fandikana diso. Raha jerena izany dia tsara ny manakarama ireo manam-pahaizana momba ny AI izay mahafantatra ny indostrianao sy ny pitsopitsony tafiditra ao amin'ny sehatra misy anao. Na dia tsy manao izany aza izy ireo dia hidina amin'ny fahaizan'izy ireo mianatra izany rehefa tonga amin'ny maha-mety azy amin'ny ekipan'ny deployment AI anao izany. Ny mpianatra mahay dia manana ny fahaiza-manaony hianatra amim-pahombiazana sy hahomby amin'ny toe-javatra rehetra.
Ny fitongilanana AI dia iray amin'ireo olana lehibe tokony hodinihina rehefa tonga amin'ny fametrahana AI. Ohatra, zava-dehibe ny fiasan'ny fizotran'ny fanamarinana ny maha-izy azy tsy misy fifanoherana ho an'ny rehetra tsy misy fitongilanana mifototra amin'ny lahy sy ny vavy, firazanana, fivavahana, foko, sns. mazava ho azy fa mampalahelo ary mety hampidina ny fikambananao fa tsy hiakatra.
Mba hampihenana ny fitongilanana AI dia zava-dehibe ho an'ny ekipa AI ny manana fahaiza-mitantana. Ary koa, ny ekipan'ny AI dia afaka mampiasa fitaovana rafi-pitantanana hanatsarana ny fahaizany mandray fanapahan-kevitra ary hanaisotra ny fironana mitongilana rehetra. Ny fahombiazan'ny AI amin'ny ho avy dia miankina amin'ny halehiben'ny fanavakavahana sy ny fitongilanana mety ho fongotra. Noho izany, ny ekipan'ny deployment AI anao dia tokony hahay tsara ny fitongilanana AI ary hanana fahaiza-mitantana.
Ny ekipan'ny deployment AI dia tokony hanana fahaizana mifandray tsara. Nahoana no toy izany? Ny fifandraisana tsara dia manampy ny mpikambana ao amin'ny ekipa hifanerasera amin'ny fomba mahomby sy hamokatra vokatra irina miaraka. Alaivo sary an-tsaina, raha tsy ampy fifandraisana mahomby ny ekipanao AI, mety ho milamina ve izany? Ny valiny dia mazava ho azy fa tsia lehibe.
Ny drafitra stratejika, ny fifanakalozan-kevitra, ary saika ny zava-drehetra dia mitaky fahaizana mifandray tsara. Ankoatr'izay, tsy manana fahaizana ara-teknika amin'ny AI ny tsirairay. Raha jerena izany, rehefa mifandray amin'ny mpanjifanao na mpikambana tsy ara-teknika ao amin'ny ekipa, ny injeniera AI dia tokony ho afaka manazava zavatra amin'izy ireo amin'ny fomba tsy ara-teknika nefa azo takarina tsara.
Izany no mahatonga ny ekipan'ny deployment AI anao hanana fahaizana mifandray tsara. Tokony hamakafaka tsara ny fahaizan'ny mpifaninana iray ianao alohan'ny handraisana azy. Na dia tsy manana fahaiza-miresaka tsara aza izy ireo, fa manana fahalalana tsara momba ny AI sy fahaizana mianatra haingana, dia afaka miasa amin'ny fanatsarana ny fahaizany mifandray ianao rehefa avy nandray azy ireo.
Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia teknolojia tena lehibe. Manana elatra midadasika izy io ary misy zavatra maro azo atao. Raha tsy voafehin'ny fitsipika sy fitsipika sasany ny fampiasana AI dia mety hampidi-doza lehibe ho an'ny tsirairay, vondrona, ary na dia ny fiarahamonina aza. Ny AI dia afaka manitsakitsaka ny zo fototry ny tsirairay mihitsy aza. Ohatra, ny famerenana ny fitiliana mifototra amin'ny fitaovana AI izay mitongilana amin'ny fiaviana sy fivavahana sasany dia mety hampidi-doza ho an'ny olona avy amin'ny vondrona vitsy an'isa.
Raha jerena izany dia ilaina ny mamatotra ny fampiasana AI amin'ny fitsipika sasany. Ny fitsipika manan-kery dia tonga amin'ny endrika maro. Misy lalàna iraisam-pirenena, lalàna momba ny firenena, ary fitsipika napetraky ny orinasa samirery. Ny ekipan'ny deployment AI anao dia tokony hanana fahalalana ara-teknika lalina momba ny fanao amin'ny fanarahan-dalàna. Miaraka amin'io fahalalana io no ahafahan'izy ireo manampy anao hitoetra ho azo antoka ara-dalàna rehefa mikasika ny fampiasana AI.
Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia lasa iray amin'ireo teknolojia malaza amin'ny tontolon'ny fandraharahana ankehitriny. Mba hahazoana tombony betsaka amin'ity teknolojia mampitolagaga ity dia zava-dehibe ho anao ny fananganana ekipan'ny AI mahay. Mba hanaovana izany, tokony ho fantatrao tsara hoe inona no fahaiza-manao tokony ananan'ny injeniera deployment AI mba hiasa tsara. Ity lahatsoratra ity dia ahitana ny fahaiza-manao manan-danja indrindra ilaina amin'ny fametrahana AI mahomby. Aza adino ny mandinika azy ireo rehefa manakarama injeniera AI.